राष्ट्रपति रामवरण यादवले राजीनामा नदिने — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » मुख्य समाचार, राजनीति → राष्ट्रपति रामवरण यादवले राजीनामा नदिने
October 27, 2015३४९ पटक
‘अन्तराष्ट्रिय प्रचलन एवं रिप्लेसमेन्टको सिद्धान्तअनुसार राजीनामा दिइरहनु पर्दैन,’ राष्ट्रपति डा. यादवका कानुनी सल्लाहकार ललितबहादुर बस्नेतले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अमेरिकामा पनि राष्ट्रपतिले राजीनामा गर्दैनन्, नयाँबाट रिप्लेसमेन्ट हुन्छ ।’
नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि डा. यादव स्वतः प्रतिस्थापित हुनेछन् । नयाँ संविधान, कानुनमा पनि राष्ट्रपतिले कस्लाई राजीनामा बुझाउने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छैन । तर, सपथ भने प्रधानन्यायाधीशबाट लिने व्यवस्था छ ।
नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी, कांग्रेस नेता कुलबहादुर गुरुङ र नेमकिपाका नारायण महर्जनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।अनलाईन खबर मा छ ।